Relationship Archives » Page5of 60 » Myanmar Family Life
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူများက သတ်မှတ်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူ့ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတွေက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်..။
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုပြုမူတတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်ဟာဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော်…
(၁) မချစ်သင့်တဲ့သူကို မချစ်ဘူး..
ဒီလိုမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ မချစ်သင့်တဲ့သူတွေကို ဘယ်တော့မှ ချစ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြန်တာ၊ လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေကို အရမ်းမုန်းပြီး အဲလိုမဖြစ်အောင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်ကြပါတယ်..။
မချစ်သင့်တဲ့သူမျိုးကိုဆို အစကတည်းက မပတ်သက်မိအောင် နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်းသူတို့ဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်မရှိပါဘူး..။
(၂) ကိုယ့်ကိုမလိုချင်တဲ့သူဆီမှာ မတွယ်ကပ်ဘူး..
ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို မချစ်တော့ဘူး၊ မလိုချင်တော့ဘူး၊ ကောင်းကောင်း တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီ့လူဆီမှာ အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး တွယ်ကပ်နေမယ့်သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး..။
ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူကို စွန့်ခွာသွားဖို့ ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးသလို၊ နောက်တွန့်နေမယ့် သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက် အချစ်ဆိုတာ ဘဝတစ်ခုလုံးမဟုတ်တာကြောင့် အချစ်တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားတာမျိုးကို သည်းခံနေမယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူးနော်…
တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေက ပိုက်ဆံမချမ်းသာရင်တောင် မာနနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတော့ ချမ်းသာကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီက ခြူစားတာတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီး အပေးအယူလုပ်တာတွေ ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး..။
သူတို့အတွက် ဘယ်သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်က ရှက်စရာမဟုတ်သလို၊ သူများဆီက အချောင်ရတဲ့ပိုက်ဆံထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ပြီး ကိုယ့်ခွန်အားနဲ့ရတဲ့ ချွေးနဲစာကို ပိုပြီးတန်ဖိုးထားပါတယ်..။
(၄) မိန်းကလေးအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်..
သူတို့ဟာ သူတို့ကိုသူတို့ မိန်းကလေးတွေအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ခံယူထားသူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့အပြုအမူ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အစစအရာရာမှာ လက်လွတ်စပယ်၊ ပေါ့တီးပေါ့ပျက် မနေတတ်ပါဘူး..။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကြောင့်တခြားမိန်းကလေးတွေကိုပါ မကောင်းမြင်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်သလို၊ သူတို့ကြောင့်နဲ့ အခြားမိန်းကလေးတွေကို အထင်သေးတာမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေပါ..။
(၅) သူများကို မကစားဘူး..
သူတို့တွေဟာ ဘယ်တော့မှ တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကို မကစားတတ်ပါဘူး။ ချစ်သူရှိရက်နဲ့ ဖောက်ပြန်တာမျိုး၊ ဆိုင်သူရှိနေတဲ့သူကို စနိုက်ကျော်တာမျိုး၊ လိုချင်တပ်မက်တာမျိုး၊ တကယ်မချစ်ပဲအပျော်တွဲတာမျိုးတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါဘူး..။
အကြောင်းကတော့ သူတို့ဟာ စိတ်နေစိတ်ထား အထက်တန်းကျပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်အတွက်နဲ့ တစ်ဖက်သားကို ဒဏ်ရာမရစေချင်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့် သူတို့ဟာ FA တွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်..။
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးဟာ သူမြားက သတျမှတျပေးရတာမဟုတျပါဘူး၊ ကိုယျကိုယျတိုငျ သတျမှတျတာမြိုးပါ။ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားနဲ့ သူ့ကိုတနျဖိုးထားခွငျးတှကေ သူ့ရဲ့တနျဖိုးကို ဖျောပွနတောဖွဈပါတယျ..။
အခုဖျောပွပေးမှာကတော့ တနျဖိုးရှိတဲ့မိနျးကလေးတှဟော အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျရငျ ဘယျလိုပွုမူတတျသလဲ၊ ဘယျလိုဆုံးဖွတျခကျြခတြတျသလဲ ပွီးတော့ ဘယျလိုစိတျဓာတျရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယျလို့ သငျဟာဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနခေဲ့ရငျ တနျဖိုးရှိတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျအဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျကို ဂုဏျယူလိုကျပါနျော…
(၁) မခဈြသငျ့တဲ့သူကို မခဈြဘူး..
ဒီလိုမိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ မခဈြသငျ့တဲ့သူတှကေို ဘယျတော့မှ ခဈြမိမှာမဟုတျပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ သူတို့ဟာ ကိုယျကငျြ့တရားဖောကျပွနျတာ၊ လူမှုရေးဖောကျပွနျတာမြိုးတှကေို အရမျးမုနျးပွီး အဲလိုမဖွဈအောငျလညျး အရမျးဂရုစိုကျကွပါတယျ..။
မခဈြသငျ့တဲ့သူမြိုးကိုဆို အစကတညျးက မပတျသကျမိအောငျ နတေတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လညျးသူတို့ဟာ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီး နာမညျပကျြမရှိပါဘူး..။
(၂) ကိုယျ့ကိုမလိုခငျြတဲ့သူဆီမှာ မတှယျကပျဘူး..
ဒီလိုမိနျးကလေးတှဟော လူတဈယောကျကိုယျ့ကို မခဈြတော့ဘူး၊ မလိုခငျြတော့ဘူး၊ ကောငျးကောငျး တနျဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရငျ အဲဒီ့လူဆီမှာ အောကျကနြောကျကခြံပွီး တှယျကပျနမေယျ့သူမြိုး မဟုတျပါဘူး..။
ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမထားတဲ့သူကို စှနျ့ခှာသှားဖို့ ဘယျတော့မှ ဝနျမလေးသလို၊ နောကျတှနျ့နမေယျ့ သူတှမေဟုတျပါဘူး။ သူတို့အတှကျ အခဈြဆိုတာ ဘဝတဈခုလုံးမဟုတျတာကွောငျ့ အခဈြတဈခုတညျးအတှကျနဲ့ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမထားတာမြိုးကို သညျးခံနမေယျ့သူတှေ မဟုတျပါဘူးနျော…
တနျဖိုးရှိတဲ့မိနျးကလေးတှကေ ပိုကျဆံမခမျြးသာရငျတောငျ မာနနဲ့ကိုယျကငျြ့တရားတော့ ခမျြးသာကွပါတယျ။ သူတို့တှဟော ယောကျြားတဈယောကျဆီက ခွူစားတာတှေ၊ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ရငျးပွီး အပေးအယူလုပျတာတှေ ဘယျတော့မှမလုပျပါဘူး..။
သူတို့အတှကျ ဘယျသမ်မာအာဇီဝ အလုပျက ရှကျစရာမဟုတျသလို၊ သူမြားဆီက အခြောငျရတဲ့ပိုကျဆံထကျ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျပွီး ကိုယျ့ခှနျအားနဲ့ရတဲ့ ခြှေးနဲစာကို ပိုပွီးတနျဖိုးထားပါတယျ..။
(၄) မိနျးကလေးအားလုံးကို ကိုယျစားပွုတယျ..
သူတို့ဟာ သူတို့ကိုသူတို့ မိနျးကလေးတှအေားလုံးကို ကိုယျစားပွုတယျလို့ ခံယူထားသူတှပေါ။ သူတို့ရဲ့အပွုအမူ၊ ကိုယျကငျြ့တရား၊ အစစအရာရာမှာ လကျလှတျစပယျ၊ ပေါ့တီးပေါ့ပကျြ မနတေတျပါဘူး..။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတို့ကွောငျ့တခွားမိနျးကလေးတှကေိုပါ မကောငျးမွငျတာမြိုး မဖွဈစခေငျြသလို၊ သူတို့ကွောငျ့နဲ့ အခွားမိနျးကလေးတှကေို အထငျသေးတာမြိုးတှေ မဖွဈစခေငျြလို့ပါ။ သူတို့တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဂုဏျကိုမွှငျ့တငျပေးဖို့ ကွိုးစားကွတဲ့သူတှပေါ..။
(၅) သူမြားကို မကစားဘူး..
သူတို့တှဟော ဘယျတော့မှ တဈဖကျသားရဲ့ခံစားခကျြကို မကစားတတျပါဘူး။ ခဈြသူရှိရကျနဲ့ ဖောကျပွနျတာမြိုး၊ ဆိုငျသူရှိနတေဲ့သူကို စနိုကျကြျောတာမြိုး၊ လိုခငျြတပျမကျတာမြိုး၊ တကယျမခဈြပဲအပြျောတှဲတာမြိုးတှေ ဘယျတော့မှ မလုပျပါဘူး..။
အကွောငျးကတော့ သူတို့ဟာ စိတျနစေိတျထား အထကျတနျးကပြွီး တနျဖိုးရှိတဲ့မိနျးကလေးတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ကိုယျ့အတှကျနဲ့ တဈဖကျသားကို ဒဏျရာမရစခေငျြလို့ပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့ဟာ FA တှဖွေဈတတျကွပါတယျ..။
စာတော်တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဆိုတာနဲ့ မျက်စိထဲ ပြေးမြင်လိုက်တာက Smart ကျတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့။ ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလို့ လူအမြင်မှာလဲ တင့်တယ်ပြီး လူပုံအလယ်ခေါ်သွားရတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့လူမျိုးကိုပြောတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲတော်ပြီးထက်မြက်နေပါစေ၊ စိတ်ဓာတ်မကောင်းရင်အလကားပါပဲ။ IQ မြင့်ပြီး EQ နိမ့်ရင် ဘာမှသုံးစားလို့မရပါဘူး၊ ဒီလိုလူနဲ့လက်တွဲမိရင် သင့်ဘဝတစ်ခုလုံးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။
စာတော်တဲ့ကျောင်းသား(Smart Student) တွေဟာ အချစ်ရေးမှာ သစ္စာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောကြပါသလဲ? အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေစာတော်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ကိုယ့်ကိုချိတ်တိတ်တိတ်လာလုပ်နေပြီဆိုရင် သတိထားဖို့လိုနေပါပြီ။
ဒီမှာ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ ထူးခြားချက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ခံယူချက်အချို့ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တော်တဲ့ထက်တဲ့ကျောင်းသားတော်တော်များများဟာ လက်တွေ့ဆန်ကြတာများပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စည်းစနစ်ကျကျ နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုလူတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အလုပ်မျိုးလုပ်ရတာကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒီလိုအရာတွေဟာ သူတို့အတွက် အပိုသဘောဆောင်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသာဖြစ် ပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ငယ်စဉ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကြီးနဲ့ပဲ တိုင်းတာနေတတ်တဲ့ ဒီလိုလူတွေဟာ သူတို့စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုရင် အမြန်ဆုံးဖြုတ်ချခဲ့ဖို့လဲ ဝန်မလေးတတ်ကြပါဘူး။
လူတစ်ယောက်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားခိုင်မာတာက ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်မှုရေးရာ (Relationship) တစ်ခုမှာတော့ အသားလွတ်ကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ခွန်းကြီးခွန်းငယ် စကားများကြရင် အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေတတ်ရပါမယ်။ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ တော်ရုံစိတ်ရှုပ်မခံနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အချိန်ယူတွေးခေါ်မပေးတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ချစ်သူရည်းစားတွေကြားမှာ ပြဿနာတွေပိုကြီးလာပြီး လမ်းခွဲပြတ်စဲမှုဆိုတာကြီးပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ကိုသာ အလေးထားခြင်း
ဒါကတော့အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါ။ များသေားအားဖြင့် ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တဲ့ထက်တဲ့ သူတွေဟာ ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ ‘ငါစွဲ’ လေးတော့ရှိကြပါတယ်။ အိမ်သူသက်ထား(သို့) ချစ်သူကို ငါသူ့ထက်ပိုတော်တယ်၊ သူ့ထက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ဆိုပြီး သူ့ဘက်ကအမြင်ကို မလေးမစားလုပ်တာမျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်အတွေးအခေါ်တွေကို အလေးထားစေချင်ရင် သူတွေးမြင်တာတွေကို အရင်ဆုံးလေးစားသမှုပြုရမှာပါ။ ထိုအခါမှ တစ်ဖက်လူက သင်ဆိုလိုတာ၊ သင်ဖြစ်ချင်တာတွေကို အလိုလိုနေရင်းနားလည်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ကိုးကွယ်ရာ’ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဒီနေရာမှာပြဿနာရှိလာပါတယ်။ ဒီစကားပုံက ကိုယ်တော်တယ်၊ ကိုယ်တတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးဖို့ပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အားကို ကိုးတတ်ဖို့ဒီစကားပုံကို ရှေးလူကြီးတွေက စကားပုံအနေနဲ့မှတ်သားစေခဲ့တာပါ။
စာတော်တဲ့ ကျောင်းသားတော်တော်များများဟာ များသောအားဖြင့်သွေးအေးတတ်ကြပါတယ်။ လိုချင်တာကို မရရအောင်ကြိုးစားပြီး ယူလေ့ရှိကြတဲ့ type မျိုးပါ။ ဒါကလဲ သူတို့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်လာတဲ့ မိဘတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာ- ငယ်စဉ်က အဆင့်တစ် ရကိုရ ရမယ်၊ အမှတ်ကောင်းဖို့ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ၊ အစရှိသော အတွေးတွေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ခံလာရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လိုချင်တာရဖို့ သွေးအေးပြတ်သားလာတတ်တာမျိုးက အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း အဆင့်(၁) ရခဲ့တာ၊ အမှတ်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကလဲ ကြီးလာတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာ ဘာမှအကျိုးမပြုလာပါဘူး။ ကလေးငယ်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းလာတတ်တဲ့ အတ္တတစ်ခုပဲအဖတ်တင်ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ။ ဒီတစ်ချက်ကတော့ မိဘတွေအထူးသတိပြုရမယ့် အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ နေ့စဉ်ဘဝကြီးမှာ စီးမျောမနေဘူး
တော်တဲ့ထက်တဲ့ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ဦးနှောက်ထဲမှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အကြောင်းကိုပဲတွေးဆ နေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမကောင်းဘူး မဟုတ်ဘူး၊ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူဆိုတာကလဲ သူ့နေရာနဲ့သူ အလိုက်သင့်လေးနေတတ်ဖို့ကလဲ လိုသေးတယ်ခင်ဗျ။ ငယ်စဉ်က စာကျက်ရမှာမို့ သူငယ်ချင်းတွေ အပြင်ထွက်လည်ဖို့လာခေါ်တာကို မလိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုလူတစ်ယောက် ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သူ့မှာ အမှတ်ရနေစရာအတိတ်နေ့ရက်တွေဘာတွေ သိပ်မရှိဘူး။ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးတွေသိပ်မလုပ်ခဲ့တော့ အတ္တတွေကြီးတတ်လာမယ်၊ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်တော့ဘူး၊ သူများအတွက်မစဉ်းစားပေးတတ်တော့ဘူး၊ စဉ်းစားပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လဲ မထင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဘဝမှာ ပျော်စရာရှိရင်ပျော်၊ စာကျက်စရာရှိရင်စာကျက်၊ အလုပ်ကြိုးစားစရာရှိရင် ကြိုးစားလိုက် သူ့နေရာနဲ့သူအလိုက်သင့်နေတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စာတော်တဲ့သူတွေဟာ ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလဲ ကျောင်းစာ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့လဲ အလုပ်ကိုပဲဖိလုပ် ဘဝကိုစီးမျောလိုက်ပါတာမျိုးတွေ သိပ်မလုပ်ကြပါဘူး။ ဒီလို လူမျိုးနဲ့ ဒိတ်ရမယ့် ကိုယ့်အဖြစ်ကိုသာအရင်ဆုံး ပြေးမြင်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့။ ပျော်စရာကောင်းမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆိုရင် စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက် ကဘယ်လို သဘောထားရှိသလဲဆိုတာသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပိုပိုလေးက တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒီလိုပို့စ်တွေကို ဖတ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်မိတယ်ဆို like&share လုပ်ပေးဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့ဦး။
ကိုယ့်အပေါ်နာကျည်းအောင်လုပ်ခဲ့သူတွေကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိအနာဆုံး ကလဲ့စားချေနည်းများ
ကလဲ့စားချေတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကို ထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတွေကိုတော့ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုဒေါသ၊ မောဟကင်းကင်းနဲ့ အကုသိုလ်ရှင်းရှင်းကလဲ့စားချေနိုင်မလဲဆိုတာကို စာရေးသူကသေချာလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့သူနဲ့ ကပ်လျက်ထိုင်နေပြီး အဲဒီလူကိုနည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်တာကလည်း ကလဲ့စားချေနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက်ဘာမှကောင်းကျိုးမရှိတဲ့သူအကြောင်းကို ခေါင်းထဲထည့်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးခွင့်မပေးပါနဲ။ အနိုင်ကျင့်မခံပါနဲ့။ ကိုယ့်နေ့ရက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲဖန်တီးပါ။
၂။ မိမိကိုယ်ကိုပဲ ဂရုစိုက်ပါ
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပျော်ပျော်ကြီးအကောင်းဆုံးနေထိုင်နေတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေကို ကလဲ့စားချေနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် သင့်ဘဝကြီးက ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတယ်ဆိုရင်တောင် သင်ဘယ်လောက်နာကျင်နေရကြောင်း၊ သင်ဘယ်လိုခံစားနေရကြောင်း လုံးဝမပြသပါနဲ့။ သင့်တန်ဖိုးကို မသိတဲ့လူအတွက် ဘာမှခံစားပြနေစရာမလိုပါဘူး။ ပျော်ပျော်နေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါ။ ဂရုစိုက်ပါ။
လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှ မနှိုင်းပါနဲ့။ ငါသူဒုက္ခရောက်တုန်းက ကူညီပေးခဲ့တာမို့ သင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ပြန်ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ သင်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန် သင့်ခံစားချက်တွေကို မျှဝေပေးလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့။ မျှော်လင့်ချက်ကင်းကင်းနဲ့သာကူညီပေးပါ။ ကိုယ်မအားတဲ့အချိန်၊ အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်စရာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ အားနားပါးနာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်လွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အလုပ်တွေကို ပစ်ချပြီး သူတို့ကိုသွားမကူညီပါနဲ့။ ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့် သင်ပဲစိတ်ပင်ပန်းရပါမယ်။ လှည့်ထွက်တတ်ပါစေ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်လုပ်ရပ်တွေကို အထင်သေးခဲ့မယ်။ သင့်ရည်မှန်းချက်တွေကို ရိုက်ချိုးခဲ့မယ်။ သင့်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို လှောင်ပြောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ စိတ်ထဲစွဲနေအောင်မှတ်ထားပါ။ အဲဒီလူတွေမှားကြောင်းကို သင့်အောင်မြင်မှု၊ သင့်အလုပ်တွေနဲ့သာ သက်သေပြလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံပါ။ သင်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန် အဲဒီလူတွေသင့်ကို မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ကြည့်ရဲရင်တောင် ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါ။
သူကကိုယ့်ကို သေလောက်အောင်မုန်းနေတယ်။ အနားမှာမရှိစေချင်ဘူး။ လိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာလည်း ကိုယ့်မကောင်းကြောင်းတွေ လျှောက်ပြောနေတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေလည်း လုယူဖို့ကြိုးစားနေမယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ လုံးဝဒေါသမထွက်ပြပါနဲ့။ သူတို့တွေက ကိုယ်ဒေါသထွက်လေပိုပျော်လေပါ။ တတ်နိုင်သလောက် ပြုံးပြုံးလေးနေပြီး ခေါင်းကိုမော့ ရင်ကိုကော့ထားလိုက်ပါ။ သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ရှူပ်ပြီး လောင်နေကြပါလိမ့်မယ်။
Ref : wikiHow “How to Get Revenge on Anyone”
Credit to Yoyarlay
ကောင်မလေးတစ်ယောက် သင့်ကို စိတ်ပါနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက်
Categories: Relationship, ထူးခြားဆန်းပြား
အမျိုးသမီးတွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ တကယ်ရောအဲ့လောက်ခက်လို့လား ။အခု ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြမယ် အချက် ၁၀ ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်ပါနေတာကို သိနိုင်မယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။
၁. သင့်အနားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေခြင်း
များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အပေါ်ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေက အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။နဲနဲတော့ ကပြောင်းကပြန်ဆန်တယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလိုသူခံစားလာရရင် ရှက်ရွံ့လာပြီးတော့ သင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတတ်တယ် ။
တစ်ယောက်ယောက်စိတ်ပါနေတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုဖြစ်တာက ယေဘုယျအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲ ။သူစိတ်ပါနေပြီဆိုရင်သင့်ကိုထိဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာလိမ့်မယ် ။အခုလိုတွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သင်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုက်နဲ့တော့ ။
သူမရဲ့အပြောအဆိုအမူအယာကို သင်သတိထားမိလာလိမ့်မယ် ။တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို ညစ်ပေပေပြောတတ်လာပြီးတော့ ချွဲတဲ့အသံမျိုးတွေပေါက်လာလိမ့်မယ် ။ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လူ..သင်မကြာခင် ကံကောင်းပြီပဲ ။
အမျိုးသားတွေစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် မြင်ရတာအသိသာကြီးပါ ။အမျိုးသမီးတွေကျတော့ သူတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ စိုစွတ်လာပြီး နို့သီးခေါင်းထိပ်လေးတွေမာလာတာပဲရှိတဲ့အတွက် အပေါ်ယံတော့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
အင်း…တကယ်တော့အမျိုးသားတွေပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ။သူတို့လည်း ကြည့်ကြတယ်…သူအရမ်းစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် စိတ်လွတ်သွားတတ်တယ် ။ဒါကတော့ သူသင့်ကိုအရမ်းလိုအပ်နေပြီဆိုတာကို ပြသတဲ့သက်သေပါပဲ ။
ကြာကြည့်ဆိုတာကိုကြားရုံနဲ့သဘောပေါက်ပြီထင်တာပဲ ။သင်အဝတ်အစားတွေကိုစုတ်ဖြဲပြီးတော့ သင့်ကိုသူတို့ကိုယ်ထဲဆွဲယူပစ်လိုက်ချင်တဲ့သဘောပဲ ။
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဖွန်ကြောင်တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုရှားမှရှားပါပဲ ။ဒါပေမယ့် သူဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့အခါ သင့်ဘေးမှာ ရစ်ဝဲနေပါလိမ့်မယ် ။ဒါဟာ သင့်ကိုသဘောအရမ်းကျလို့ဖြစ်ပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့သဘောကျတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါ ။
လူသားတွေအတွက်တော့ မျက်လုံးတွေက တကယ်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ ။တကယ်လို့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာကို ကိုယ်သတိထားမိတာတောင် သူကဆက်ကြည့်နေတုန်းပဲဆိုရင်တော့ကံကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်လာတော့မယ်လို့တွေးထားလိုက်ပါတော့ ။
ကောင်မလေးတွေဟာအမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးသားပါ ။သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လက်နက်တွေထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော..ဒီဗျူဟာ ဟာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုရှိပြီးတော့ အမြဲတမ်းလည်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗျူဟာပါပဲ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်သူက တောင့်ခံနိုင်မှာမို့လို့လဲ ။
ထူးဆန်းတယ်မလား အမှန်ပဲ ။ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အရမ်းစိတ်ပါနေပြီဆိုရင် သင်ဘာပြောပြော ချီးကျူးနေလိမ့်မယ် ။ဒါဆိုရင်တော့ ဒီညသူ့ကိုသင့်အိမ်ခေါ်သွားလို့ရပြီ ။
Writer – Min Thu(Daily Hot News)